Appleရဲ့ iWatch က ဘယ်လိုမျိုးလဲ - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home Knowledge Appleရဲ့ iWatch က ဘယ်လိုမျိုးလဲ
Appleရဲ့ iWatch က ဘယ်လိုမျိုးလဲ
Aung Ko Htet at 5:03:00 PM Knowledge,
Appleရဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ထုတ်လုပ်ရောင်းချမယ့် iWatchနဲ့ ဆိုင်တဲ့ သိကောင်းစရာ အချက်တွေကို တင်ပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၁) ကြိုးမဲ့ Chargingစနစ်ကို အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး ဒီဇိုင်းပိုင်း အထူးကောင်းမွန်မှာ ဖြစ်သလို လက်ရှိ် ဖုန်းတွေကို အကောင်းဆုံး အစားထိုး သုံးစွဲနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး ခလုတ်တွေနေရာမှာလည်း Siriတွေ ၀င်ရောက် လာပါလိမ့်မယ်။
(၂) iWatchဟာ တစ်ယောက်ကိုင် ပစ္စည်းဖြစ်လာမှာ ဖြစ်ပြီး Passwordတွေ အကြိမ်ကြိမ် ရိုက်ထည့်ရတဲ့ အလုပ်ကို သက်သာစေမှာပါ။ နောက်ပြီး သင်သာ iPhoneမေ့ကျန်ခဲ့မယ်ဆိုရင် သင့်ကို iWatchက သတိပေးပါလိမ့်မယ်။
(၃) တကယ်လို့ iPhoneက ဖုန်းလာရင် ဘယ်သူ့ဆီကလာတယ်ဆိုတာ iWatchက ပြောကြားပေး မှာ ဖြစ်သလို ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ အချက်တွေကိုလည်း iWatchက အာရုံခံပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး iPhoneနဲ့ iPodတွေက သီချင်းတွေကိုလည်း iWatchကနေ ထိန်းချုပ်မှုတွေ လုပ်ဆောင်နိုင်မှာပါ။
(၄) KidCodeလို မထင်မှတ်တဲ့ Appတွေကို ထည့်သွင်းသုံးစွဲမှုတွေ လုပ်ဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်သလို Entertainment တွေ ကိုလည်း ထိန်းချုပ်နိုင်ဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး အကွာအဝေးတိုင်း စနစ် ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပြီး သင်တိုင်းတာချင်တဲ့ အရာကို လက်ညှိုးထိုးလိုက်ရုံနဲ့ iWatch က ဖြေကြားပေး မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော် myanmar collection ကနေ လေ့လာရင်းတွေ့လို့ပြန် share ပေးလိုက်တာပါ။
Aung Ko Htet ( IT studier)
Galaxy Tab27.0 (3G + WiFi) GT-P3100 Firmware ဗ...
Cyberlink PowerRecover 5.7 For Xp/Vista/7/8 (x32) ...
ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး Data Recovery Software ဖြစ်တဲ့ St...
သူငယ်ချင်းများအားလုံး ကွန်ပျူတာမှာ ရာသီခွင်အချစ...
Android 4.0 နှင့်အထက် ဖုန်းတွေမှာ မြန်မာဖောင့်ကို ...
Windows7Alienware Blue Edition (x64/Eng/Jul2013)...
Google+ profile မှ Blogger profile သို့ပြောင်းလဲခြ...
LG Mobile Phone Secret Codes Collection 2013
Windows XP, Vista,7တွေမှာ Window 8 Charms Bar အသ...
Serial key ရှာဖွေရအောင်
သမိုင်းဝင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း မိန့်ခွန်းများ < 6...
Export Contacts & Data in CSV 1.8.9
ကိုယ့်ဓါတ်ပုံတွေကို ခဲခြစ်ပုံအဖြစ်ပြောင်းပေးမဲ့ Pe...
ကိုယ့် ကွန်ပျူတာရဲ့ Hardware Feature ကို ပြည့်ပြည်...
Computer ပေါ်မှာလုပ်သမျှကို Video Fileနဲ့ပြန်ကြည့်လ...
Huawei Y210 Wifi Error ဖြေရှင်းနည်း
အကောင်းဆုံးDNSကို အသုံးပြု၍အင်တာနက် အမြန်နှုန်းကြို...
Cbox မှာ Colour ပြောင်းဖို့..
Rooting Samsung Glaxy Ace GT-S5839i Ginger V 2.3.6
SONY XPERIA E ROOT
Blue Screen Error ဖြေရှင်းနည်း (၂)
Zahir Accounting Enterprise 5.1 Full
ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ ICS 4.0.4 Version နဲ့ Phone Games ...
Smart Launcher Pro v1.7.7.bugfix Apk
Computer တွေအတွက် Smart Defrag v2
Android Phone မှာ Root မလုပ်ဘဲမြန်မာစာသုံးရအောင်
ကိုယ့်ရဲ့ Blog မှာ Mailware တွေ့တယ်ဆိုပြီးပြတဲ့ G...
Huawei U8660 Recovery & Root
My computer ထဲတွင် Drive တွေကိုဝှက်ထားမယ်/ ပြန်ဖေါ်...
Galaxy Ace Duos S6802 Android 2.3.6 Official Firmw...
Huawei Y220T Camera Error Fixing & Root (ကင်မရာဇော...
Font Design လေးတွေ ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလိုသူများအတွက်
Style3မျိုးနဲ့သုံးနိုင်တဲ့ Windows MA KI Version...
ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ Ringtone တွေအလွယ်တကူဖန်တီးပေးမယ့် ...